ठाउँ के छ? उहाँले कुनै पनि सीमाहरु छ? के विज्ञान यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिन सक्छ? यो हामी यस लेखमा बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
ठाउँ को विशेषताहरु दिने अघि, हामी यस अवधि अद्वितीय छैन भनेर बुझ्न पर्छ। ठाउँ को अवधारणा गणित, भौतिक, भूगोल, देखा दर्शन, धर्म , र विज्ञान कल्पना। विभिन्न विषयों कार्य आधारमा, फरक तरिकामा यसलाई बुझ्न र आफ्नो व्याख्याहरु पाउन। स्पेस - केहि फिट जसमा एक ठाउँ; सबैभन्दा सरल र mundane परिभाषा निम्न छ वस्तुहरु बीच दूरी।
दर्शन यसलाई बित्तिकै समय संग सम्बन्धित छन् भनेर मौलिक विभाग को रूपमा सन्दर्भमा। विभिन्न वस्तुहरु बीच यस सम्बन्ध, उनको नातेदार स्थिति, समय को एक विशिष्ट अवधि गर्न जडान छैन। यो कुरा को अस्तित्व को मोड characterizes कि हुनुको निश्चितताका छ।
स्पेस को दर्शन अनुसार विशिष्ट गुण, अर्थात् लम्बाइ, heterogeneity, संरचना, anisotropy, को निरन्तरता छ। यसलाई निरन्तर एक तथाकथित समय-स्थान बनाउन, समय संग पारस्परिक।
ठाउँ इतिहास को प्रतिनिधित्व
स्पेस प्रतिनिधित्व पुरातन समयका देखि अस्तित्व। त्यसपछि यो फरक स्तर मा, देवताहरूलाई, मानिस र आत्माहरू दुनिया गठन, बहु-स्तरित र heterogeneous हुनुको विभाजित भएको थियो। यो अवधारणा को विकास गर्न पहिलो महत्त्वपूर्ण गति युक्लिड बनाउँछ। ठाउँ को ज्यामिति को माध्यम ले, उहाँले असीमित र homogeneous रूपमा बताउँछन्। Giordano ब्रुनो, स्वर्गीय शरीर अध्ययन निरपेक्ष र सापेक्ष स्थान र समय distinguishes।
यस बीचमा कडा विज्ञान Euclidean र गैर-Euclidean ज्यामिति को समर्थकहरूको देखिन्छन्। त्यहाँ ठाउँ, एन-आयामी ठाउँ को झुकाव बारेमा सिद्धान्त हो। समय र ठाउँ को लामो अवधि तिनीहरूले कुरा असर छैन भनेर अनुमान लाउनुको, अलग मानिन्छ।
सापेक्षता को XX सताब्दी आइंस्टीन सिद्धान्त मा खुल्छ। उनको अनुसार, समय, ठाउँ र कुरा सम्वन्धि छन्। आइन्स्टाइन निम्न निष्कर्ष: स्पेस सबै कुरा हटाउन भने, कुनै ठाउँ नै हुनेछ।
गणितीय अनुशासन तर्क को प्रकाश मा अन्तरिक्ष विचार छ, तर त्यो दर्शन बिना गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ मुख्य समस्या गणित मा निहित छन् भनेर अमूर्त डिजाइन को दुनिया गर्न वास्तविकता को सम्बन्ध छ। रूपमा अन्यत्र, यो विज्ञान विशिष्ट गणना को माध्यम द्वारा घटना व्याख्या गर्न खोज्छ, त्यसैले उनको ठाउँ लागि - संरचना संग सेट गरिएको छ।
गणित यो वातावरणको परिभाषित जो विभिन्न वस्तुहरु र वस्तुहरू। यो सबै प्राथमिक ज्यामिति, आकार (डट्स) एक वा बढी विमानहरु मा अवस्थित जहाँ कम। यस सन्दर्भमा, यो तरिका, चिनारी गर्न स्पेस मापन आवश्यक थियो। यो उद्देश्य लागि, यस्तो लम्बाइ, वजन, गति, समय, मात्रा, र यति मा रूपमा गणितज्ञ विशेषताहरु प्रयोग। एन
गणितीय विज्ञान मा यी प्रकार आवंटित निर्णय स्थान: Euclidean, affine, हिल्बर्ट, सदिश, probabilistic, दुई-आयामी, तीन-आयामी र पनि आठ-आयामी। गणित को कुल छैन 22 भन्दा कम प्रकार बाहिर खडा।
गणित को तथ्याङ्कले मा सार अनुवाद गर्ने प्रयास गरिएको छ भने, भौतिक महसुस गर्न, स्पर्श सबै खोज्छ। भौतिक देखा गर्दैन, तर केही भरिएको गर्न सकिन्छ एक निश्चित पदार्थ, - त्यसपछि त्यो निष्कर्षमा कि ठाउँ गर्न आउँछ। यो अनन्त र अपरिवर्तनीय छ। प्रक्रियाहरू र घटना को एक किसिम को लागि एक रंगशालामा, जबकि तिनीहरूलाई असर गर्दैन, र नै प्रभावित छैन।
भौतिक दृश्य धेरै अंक देखि अन्तरिक्ष ठान्नुहुन्छ। तीन-आयामी - - मान, जहाँ साधारण, दैनिक संसारको unfolding प्रक्रियाहरू पहिलो यसलाई शारीरिक रूपमा परिभाषित। जहाँ शरीर र वस्तुहरु विभिन्न विस्थापन र यांत्रिक आन्दोलन लागू।
शब्द को दोस्रो समझ संग intertwined छ गणितीय मोडेल। यो अमूर्त ठाउँ छ। यो सामान्यतया वर्णन र शारीरिक तीन आयोमी दुनिया सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यहाँ, को गणित गर्न यसको विपरीत, त्यहाँ यस्तो ठाउँ वेग अवस्था, रंग ठाउँ, यो नयाँ प्रकारका छन्।
यस ठाउँ वैज्ञानिकहरू को प्रकृति र गुण बारे तर्क शानदार विचार को एक किसिम को उत्पादन गर्न पुगे। वैज्ञानिक तथ्य र अनुमानको आधारमा निरन्तर मानिसको अविश्वसनीय सम्भावनाहरू बारेमा नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ।
एक यस्तो विचार Iogana Keplera मा XVII सताब्दी मा देखा छ। चार वातावरण प्रकाश को गति नाघ्यो एक गति मा समय र दूरी मार्फत यात्रा अनुमति - यो hyperspace सम्बन्धित छ। अर्को सिद्धान्त ब्रह्माण्डको विस्तार र सबै भौतिक नियमहरू शून्य र शून्य छन् जो भित्र "pockets" गठन गर्न सक्षम छ भन्ने धारण र ठाउँ र समय पनि अवस्थित सक्छ।
हरेक वर्ष यी जस्तो देखिने पागल विचार थप र थप जन्म छन्। तथापि, तिनीहरूले विज्ञान र कल्पना को कगार मा हो भन्ने तथ्यलाई द्वारा एकताबद्ध छन्। र कुनै एक जो पक्ष निम्न असंभव सिद्धान्त मा पल्ला झुकन हुनेछ थाह छ।
विभिन्न विज्ञान द्वारा स्पेस समझ पृथ्वी सीमित छैन। दिइएको भौतिक यसको अनन्त अनुमति दिन्छ कि, हामी सीमाहरु को एक महत्वपूर्ण विस्तार बारे, उदाहरणका लागि, ब्रह्माण्डको (मुख्य प्रणाली, कि संसारमा अवस्थित सबै को totality) कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
Unfilled ब्रह्माण्डको वस्तुहरू बीच कुनै पनि शरीर जमीन जायदाद - यो ठाउँ छ। यो आकाशीय शरीर बाहिर र धरती र यसको वातावरण बाहिर यसैले छ। तथापि, "शून्य ठाउँ" अझै पनि केहि भरिएको छ: यो कण हाइड्रोजन interstellar कुरा र विद्युत विकिरण हुन्छन्।
यो भने स्पेस मा समावेश गरिएको छैन भनेर वस्तुहरू छन्, यो स्पष्ट यसको मूल पहिचान गर्न सम्भव छ भनेर देखिन्छ थियो। वास्तवमा, यो पृथ्वी वातावरण बिस्तारै पतला, यो गाह्रो बनाउँछ र यसको सीमा एकदम धमिलो छन्। वातावरण र ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय को जुदाई लागि 100 किलोमिटर ससर्त उचाइ अपनाए। धेरै खगोलविदहरु ब्रह्माण्डको बस पृथ्वीको सतह देखि 120 मी मा शुरू भएको छ भन्ने विश्वास गर्छन् हुनत।
हावा र खुला ठाउँ
पृथ्वी वातावरण समावेश गर्दैन स्पेस, गर्न यसको विपरीत, त्यहाँ यसलाई सम्बन्धित अवधारणाहरु छन्। उदाहरणका लागि, हावा ठाउँ। ब्रह्माण्ड शब्द बहु-faceted छ। उहाँले अस्पष्ट छ र भौतिक, दर्शन, र संस्कृति देखा पर्छ। सबैभन्दा भाग लागि Airspace व्यवस्था र भूगोल बुझाउँछ। यो हाम्रो ग्रह को माहौल को भाग हो, र यसको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून द्वारा नियमन छन्।
शब्द "खुल्ला ठाउँ" - वास्तवमा, एउटै। यसलाई कुनै पनि देश होइन कि एक क्षेत्रमा छ। यो तटीय राज्य को प्रादेशिक पानी, विदेश स्थित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति, सबै पहुँच छ।
स्पेस जो यो अलि फरक अर्थ दिने कुनै पनि धार्मिक विश्वास को मुख्य प्रश्न, को छ। सामान्यतया यो स्पष्ट ठाडो संरचना, घटक को वर्गीकरणका (संसारको तल माथि देखि) द्वारा परिभाषित गरिएको छ जो छ।
धार्मिक विश्वास निरन्तर उच्च सेना अनुभव कि पवित्र ठाउँ को धारणा, टी। ई एक वृद्धि दिनुहोस्। यस मामला मा, पवित्र को प्रभाव अन्तर्गत यो परिवर्तन र गुणात्मक स्पेस बाँकी फरक गर्न सकिन्छ।
ठाउँ - सार जो वर्ष सयौं लागि वैज्ञानिकहरूले र mystics चिन्ता एक जटिल र बहुमुखी अवधारणा छ। त्यहाँ एक विशाल यो अवधारणा परिभाषित, हेर्नुहोस् को समान र पूर्ण विपरीत अंक संख्या हो। तिनीहरू सबै ठाउँ एक मध्यम, एक रंगशालामा, विभिन्न प्रकारका र प्रक्रियाहरू को कार्यान्वयन को लागि एक मंच छ भन्ने तथ्यलाई मा सहमत हुनुहुन्छ। संरचना र वातावरण को गुण अझै तातो वैज्ञानिक बहस कारण छन्।
रेक्टर स्केल - यसको व्यावहारिक लाभ के हो?
हानि र घर्षण शक्ति को लाभ
सबै सम्भव गणना। साहचर्य को तत्व
भाइरस - गैर-सेलुलर जीवन प्रकारका। जीवन प्रकारका: गैर-सेलुलर र सेलुलर
Cyanide के हो? Cyanides र मानव शरीर मा आफ्नो प्रभाव
को घोंघे घरमा खुवाउन
यस बिल्ली को बच्चा आँखा fester भने
विजय को सम्मान मा पदक Jubilee
तर मा स्वादिष्ट बन्स: विशेषताहरु पकाउने, व्यञ्जनहरु र समीक्षा
मानव मेरुदण्ड संरचना: योजना, मुख्य विभागहरु को पद। संरचनात्मक सुविधाहरू
को स्कूटर के सुरु हुनेछ छैन? यदि
को मास्को क्षेत्र को पूर्ण आनन्दको मा भूमि ठूलो परिवारलाई जायदाद को आवंटन
सपना व्याख्या: खेलाची के सपना? सपना को अर्थ र व्याख्या
बिरुवा मरिच - बढ्दो नियमहरु
Filipp Nuare: Filmography र जीवनी